निको भएका १३७८८७
अपडेटः आइतबार, चैत, १५, २०७६ । ०६ः३२ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu
नेपाल लाइभ बिहीबार, असार २६, २०७६, २१:०२
(अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र उनका फिल्म निर्माता श्रीमान छवि ओझाबीच सतहमा आएको विवादको जरो घरेलु हिंसा भनिएको छ। शिल्पाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै प्रहरी गुहारेपछि हामीले दुबै पक्षका भनाइ समेटेका थियौं। बिहीबार मात्रै प्रहरीसमक्ष निर्माता ओझाले माफी मागेको समाचार आएको छ। यसैबीच, घटना र यसको सरोफेरोमा रहेर शिल्पा पोखरेलले नेपाल लाइभ सहकर्मी अनिल यादवसँग लामो वृत्तान्त सुनाइन्। बाँकी शिल्पाकै शब्दमा)
तपाईं, म र पृथ्वी जाने हो भने जाऔं, म उनीहरुसँग जान्न भनेँ। त्यसपछि उहाँ ‘होइन, भन् न भन्’ भन्दै झर्किन थाल्नुभयो। 'तँ कोसँग कहाँ जान्छस्, मैले जानकारी त पाउनुपर्‍यो नि!' भन्न थाल्नुभयो।
त्यो जानकारी त तपाईंलाई छँदैछ नि! 'फेरि तीन महिनादेखि उहाँले मलाई गाडी नलैजा' भन्न थाल्नुभएको थियो। त्यसैले बिहान कतै छोड्दिनुपर्‍यो भने उहाँले नै छोड्दिनुहुन्थ्यो, पिकअप पनि उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो। 'कहाँ जान्छु, के गर्छु त्यो त तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ' भनेर भनेँ मैले।
त्यसपछि उहाँले एकदमै नराम्रो शब्द बोल्नुभयो। तँ र..., दिउँसै रंगौलिया मनाएर हिड्ने केटी। तँलाई मैले छोडिसकेपछि तँ कहाँ जान्छेस्, जान्छेस् नि! मलाई के थाहा?' भन्दै नानाथरी बोल्न थाल्नुभयो।
यसरी नानाथरी गाली गरेपछि एउटा केटी मान्छेलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? त्यो शब्दको अर्थ के हो भनेर सोधेँ मैले। 'तैँले मलाई हेपेको? म तेरो लोग्ने हो, मैले तँलाई जहाँ जान्छेस् भन्छु, त्यहाँ जान्छेस्, जहाँ जान्नस् भन्छु त्यहाँ जान्नस्' भन्दै झम्टिन थाल्नुभयो।
म त दुईजना केटी साथीसँग पो जान लागेको हो त। त्यो पनि तपाईं आफैंले मलाई त्यो ठाउँमा छोड्दिँदै हुनुहुन्छ भने के-को समस्या? तैपनि तपाईंलाई समस्या हुन्छ भने तपाईं पनि हिड्नु न त' भनेर भनेँ।
प्रिमियरमा कतै उहाँलाई बोलाएको छैन तर मलाई मात्र बोलाएको हुन्थ्यो भने त्यही झगडा सुरु हुन्थ्यो। 'म इन्डस्ट्रीको पुरानो फिल्ममेकर तर मलाई नबोलाएर तँलाई मात्रै किन बोलायो? तेरो त्यो फिल्मको निर्माता र डिरेक्टरसँग त्यस्तो के सम्बन्ध छ?' भन्दै झगडा गर्नुहुन्थ्यो।
फेरि 'तँ जहाँ गएपनि मलाई केही फरक पर्दैन। सबै मेरै सपोर्टमा छन्' भनेर सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसले मेरो मनोबल झनै कमजोर बनाउँथ्यो।
त्यसपछि रेखा दिदी (थापा) पनि आउनुभयो मलाई सम्झाउन। 'सानोतिनो झगडा हो भने मिल्नू' भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई सबै कुरा भनेँ। सबै कुरा भनेपछि उहाँले ‘ओहो, यो मान्छे त नसुध्रिने रैछ, गीतान्जलीको पालादेखि नै लागेको बानी रैछ, अब तिमी जे गर्छौ गर’ भनेर फर्किनुभयो। 'मेरो स्वर्णिम नेपाल भन्ने संस्था पनि छ। चाहियो भने म मद्दत गर्न सक्छु' भनेर आँट दिएर जानुभएको थियो मलाई।
'हाम्रो लभ परिरहेको छ, त्यही कुरालाई निरन्तरता दिऔं' भन्नुभयो। मैंले बाहिर ल्याउने भए बिहे गरेकै कुरा ल्याऔं। नत्र यो लभसभको कुरा नगरौँ भनेँ। नत्र म तपाईसँग इन्टरभ्यू नै दिन्न भनेँ। रिलेसनलाई किन बिकाउने भनेर प्रश्न गरेँ। ल्याउने भए सत्य कुरा ल्याऔं। नत्र केही पनि गरौँ भनेँ। उहाँले मान्नुभएन। उहाँ अफेयरको कुरा चलाउँदै जानुभयो। म मिडियाबाट पन्छिन खोजेँ, त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहिनँ। अन्तिममा केही नलागेपछि एक महिनाअघि मात्रै उहाँले बिहे स्वीकार गर्नुभएको हो।
बिहेअघि उहाँ मलाई 'म्यूजिक भिडियो नगर्नू' भन्नुहुन्थ्यो। तर बिहेपछि ‘आफ्नो खर्च जुटाउनका लागि गर्नू’ भन्नुभयो। किनभने उहाँले मलाई एक पैसा पनि खर्च दिनुहुन्नथ्यो। घरको आधा खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्थ्यो। मैले म्यूजिक भिडियो नै गरिनँ भने मलाई खान मन लागेको, लाउन मन लागेको कुरा कहाँबाट ल्याउने? समस्या हुन्थ्यो। त्यसैले म आफैं कमाउँथे।
घरमा अलिअलि भाँडो त बझिहाल्छ नि। अलिअलि त भइहाल्छ नि। त्यसको लागि त मैले 'सरी' भनिसकेँ नि' भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि डिएसपी सा’बले ‘तपाईले सरी कहाँ भन्नुभयो, मुखले भन्नुस् न’ भन्नुभयो। तैपनि छवीजीले ‘हैन, मैले भनिसकेँ’ भनेर जिद्दी गर्नुभयो। डिएसपी साबले ‘मैले सुनेकै छैन’ भनेपछि अन्त्यमा उहाँ माफी माग्न तयार हुनुभयो।
त्यसपछि उहाँ डराउनुभयो। पुलिस भनेको त पुलिस हो नि। उहाँले त ‘पोइन्ट, पोइन्ट’ पक्रिनुभयो। त्यसपछि उहाँले 'अबदेखि म यस्तो गर्दिनँ' भनेर लिखित माफी माग्नुभयो।
यसरी पटक–पटक हिंसाको संकेत गरेकी थिइन् शिल्पाले
छविले 'कानको जाली फुट्ने गरी' कुटेपछि शिल्पा प्रहरीको शरणमा पुगेको खुलासा
शिल्पाका श्रीमान् छविले भनेः ममाथि जे आरोप लगाइयो, त्यो गलत छ
छविबाट सुरक्षा थ्रेट भन्दै अभिनेत्री शिल्पाले गुहारिन् प्रहरी
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख २१ हजार नाघ्यो
कोरोना संक्रमणबाट इटालीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार नाघ्यो
कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० हजार ६ सय
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख २१ हजार नाघ्यो आइतबार, चैत १६, २०७६
कोरोना संक्रमणबाट इटालीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार नाघ्यो आइतबार, चैत १६, २०७६
कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० हजार ६ सय आइतबार, चैत १६, २०७६